.: Ko Moe's Electronics Notes :.: Sunx Laser Marker
ပလတ်စတစ်၊ သစ်သား၊ ဖန်ထည်၊ သံ၊ သားရေထည် အစရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ စာလုံးတွေထွင်းချင်၊ ရေးချင် တဲ့အခါ၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ (စာလုံးအရွယ်အစား၊ Line width 12.6 um to 655 nm အထိ) ရေးချင်တဲ့အခါ ဒီ Machine ကိုသုံးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာသုံးတာက SunX LP-400 အမျိုးအစားပါ။ Sunx Laser Marker မှာ ၂မျိုးရှိပါတယ် CO2 နဲ့ FAYb ပါ။
CO2 Type က ဈေးသက်သာတယ်။ ဒါပေမယ့် Non-Impact အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ထွင်းလို့မရဘူးပေါ့။ ပလတ်စတစ်၊ ဖန်၊ သစ်သား၊ သားရေ မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ ရပါတယ်။ LP-200, LP-300, LP-400 Models တွေရှိပါတယ်။ LP-400 ကတော့ Coated Metal Substrates တွေပေါ်မှာလည်း ရပါတယ်။
CO2 LP-400 CO2 LP-200
နောက်တစ်မျိုးက FAYb Type ပါ။ သူက အထက်ကမျက်နှာပြင်တွေ အပြင် Metal တွေပါရပါတယ်။ Impact အမျိုးအစားဖြစ်လို့ ထွင်းလို့ရပါတယ်။ LP-F10, LP-V10 Models တွေရှိပါတယ်။ LP-V10 ရဲ့ Laser Beam က ပိုပြီး ကောင်းပါတယ်။
FAYb LP-V10 အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Application တွေကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Posted by ကိုမိုး at Saturday, September 01, 2007